Mpanamboatra vovoka Palmitoylethanolamide Micronized tsara indrindra
Cofttek no mpamokatra vovoka Palmitoylethanolamide (PEA) tsara indrindra any Shina. Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana famokarana tanteraka (ISO9001 & ISO14001), miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra isam-bolana 3200kg.
Vovoka Palmitoylethanolamide (PEA) (544-31-0) horonan-tsary
Vovoka Palmitoylethanolamide (PEA) Specifications
fahadiovana 98% Micronized PEA ； 98%
Formula Molecular: C18H37NO2
Molekular lanja: 299.49 g / mol
Melt Point: 93 hatramin'ny 98 ° C
Anarana simika: Hydroxyethylpalmitamide Palmidrol N-Palmitoylethanolamine Palmitylethanolamide
Antsasak'aina: 8 ora
fampiharana: Palmitoylethanolamide (PEA) dia ao amin'ny fianakaviana endocannabinoid, vondrona vondrona amides asidra matavy. Ny PEA dia voaporofo fa manana hetsika analgesic sy anti-inflammatory ary efa niasa tamin'ny fandinihana maromaro mifototra izay mifantoka amin'ny fitantanana ny fanaintainan'ny fanaintainana mitaiza eo amin'ireo marary olon-dehibe miaraka amin'ny fepetra klinika samihafa.
Palmitoylethanolamide dia amida asidra endogenika izay latsaka eo ambanin'ny kilasin'ny Agonists Factor Nuclear Factor. Mitranga voajanahary amin'ny sakafo toy ny soja, voanjo lecithin, ary ny vatan'olombelona.
Palmitoylethanolamide dia hita tamin'ny fiandohan'ny taona 1940. Hitan'ny mpahay siansa voalohany fa ny fihinana atody vovoka dia nampiroborobo ny valin'ny hery fiarovan-tena salama amin'ny zaza ary nampihena ny risika hitrangan'ny tazo mamy. Ny fikarohana hafa dia namintina fa ny atody atody dia misy fitambarana manokana, PEA. Hita ihany koa ny PEA amin'ny sakafo manontolo toy ny voanjo sy ny soja, izay manampy amin'ny fiarovana ny hery fiarovana sy fiarovana ara-pahasalamana.
Ankoatry ny fahitana azy amin'ny sakafo sasany dia miseho voajanahary amin'ny vatantsika koa ny PEA. Ny sela dia mamokatra ao amin'ny vatantsika amin'ny alàlan'ny sela maro ao amintsika ho ampahany amin'ny valinteny mahasalama. Ny PEA dia nataon'ny vatantsika manokana ho valin'ny fivontosana. Fantatra ny mitantana ny fanaintainantsika amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fiarovana ny hery fiarovantsika amin'ny fihetsiketsehana tafahoatra ary mampiroborobo ny fiasan'ny hery fiarovan'ny vatana sy ny otrikaina ao amin'ny vatana.
Ny vovon-tsakafo Palmitoylethanolamide dia ampiasaina matetika ho toy ny fanafody fanaintainana, fibromyalgia, fanaintainan'ny neuropathique, sclerosis marobe, aretin'ny tonelina carpal, ary toe-javatra maro hafa.
Palmitoylethanolamide sy ny fianakaviana Cannabinoid
Palmitoylethanolamide dia tsy voatery avy amin'ny rongony fa azo raisina ho anisan'ny fianakaviana cannabinoid. PEA dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny CBD (cannabidiol), izay iray amin'ireo fitambarana lehibe amin'ny rongony saingy tsy misy vokany psychogène io. Ny vokatra CBD dia malaza be amin'izao fotoana izao ary azo saika amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny menaka ka hatramin'ny menaka, ary ny vokatra sakafo. Ny vokatra CBD dia ampiasaina ihany koa amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana mety hitranga, anisan'izany ny fahasalamana ara-tsaina, ny hozatra ary ny fiaraha-miasa.
Ny PEA koa dia cannabinoid, saingy voadinika ho an endocannabinoid satria atao ao anatin'ny vatana izany. Saingy, tsy mitovy amin'ny cannabidiol sy tetrahydrocannabinol izany satria tsy mamorona voajanahary ireo akora simika ireo ny vatana.
Palmitoylethanolamide dia manosika ny alfa PPAR mandoro tavy, manome tanjaka, ary anti-inflammatoire. Rehefa mihetsika ireo proteinina manan-danja ireo, ny PEA dia mampiato ny asan'ny fototarazo afaka mampiroborobo ny fivontosana ary mampihena ny famokarana zavatra mamaivay marobe. Ny PEA koa dia mampihena ny asan'ny gén FAAH izay manimba ny anandamide voajanahary cannabinoid ary mampitombo ny haavon'ny anandamide ao amin'ny vatana. Anandamide dia tompon'andraikitra amin'ny fampihenana ny fanaintainanao, fampitoniana ny sainao ary fampiroboroboana ny fialan-tsasatra amin'ny vatanao.
PEA dia fantatra koa fa mifatotra amin'ny sela ao amin'ny vatana ary mampihena ny fanaintainana sy ny fivontosana. Izy io dia misy asidra palmitika amin'ny endriny, izay manampy ny vatana hanao Palmitoylethanolamide ao amin'ny vatana.
Raha ny filazan'ny mpahay siansa sasany dia tsy hisy fiatraikany amin'ny famokarana PEA ny fampitomboana fotsiny ny asidra palmitika anao. Izany dia satria ny vatanao dia tsy mampiasa PEA ao amin'ny vatanao raha tsy rehefa mila manasitrana ny fivontosana na fanaintainanao izy. Izany dia miteraka ny haavon'ny PEA ao amin'ny vatana izay miovaova isan'andro mandritra ny andro.
Ny fomba tsara indrindra ahazoana tombony amin'ny PEA dia ny fihinanana sakafo manankarena PEA na ny famenony mahazatra.
Tombontsoa sy fampiharana amin'ny vovoka Palmitoylethanolamide
Ny PEA dia voaporofo fa manala fanaintainana sy manohitra ny inflammatoire ary nampiasaina tamin'ny fitantanana fanaintainana maharitra eo amin'ireo olon-dehibe manana toe-pahasalamana marobe. Ohatra, afaka manome vokatra mahasoa toy ny adjuvant amin'ny fitsaboana ny fanaintainana miverimberina amin'ny marary efa antitra na azo ampiasaina irery amin'ny fitantanana fanaintainana miverimberina amin'ny marary marary mafy fa tsy ny analgesika nentim-paharazana izay atahorana hisy vokany ratsy.
Ny valiny nampanantena dia naseho tamin'ny fitsaboana radikulopathies tsy misy fandidiana miaraka amin'ny famolavolana PEA ultra-micronized ary ny fitsaboana miaraka amin'ny asidra alpha-lipoic mba hampihenana ny fivontosan'ny prostatitis / ny fanaintainan'ny aretin-tratra.
Ireto ambany ireto misy tombony lehibe azo avy amin'ny PEA:
· Fanamaivanana ny fahantrana
Misy porofo manamarina ny fahafahan'ny PEA mampihena ny fanaintainana mafy. Ny PEA dia efa nanadihady tamina olona 6 mahery sy fisedrana klinika 30 hatramin'ny taona 1070. Na izany aza, matetika ny fandinihana dia tsy nahavita nampiavaka ny fanaintainan'ny neuropathique sy ny tsy neuropathique. ny tombony amin'ny Palmitoylethanolamide ho an'ny fanaintainan'ny neuropathique dia tsy mazava loatra noho ny tsy fahampian'ny fampahalalana hatreto.
Ny fameperana iray hafa dia ny ankamaroan'ny fandalinana ireo dia tsy nanana fanaraha-maso placebo ary fikarohana avo lenta no takiana amin'ny fanapahana ny fahombiazan'ny PEA amin'ny fanalefahana karazana fanaintainana samihafa.
Tamin'ny fanadihadiana momba ny fandinihana olombelona 12, ny famenon-tsakafo PEA dia nampiseho fahombiazan'ny fihenan'ny herin'ny fanaintainana maharitra sy ny neuropathique nefa tsy misy vokany lehibe. Ireo olona 12 ireo dia matetika nomena fanampin-tsakafo PEA misy fatrany 200 ka hatramin'ny 1200 mg / andro mandritra ny 3 ka hatramin'ny 8 herinandro. Ny famenon-tsakafo dia naharitra tapa-bolana mba hahatratrarana ny fanjakana manala fanaintainana. Ny fakana azy mandritra ny fotoana lava dia mamelona ny vokany nefa tsy miteraka vokatra ratsy.
Ny fandalinana iray hafa natao tamin'ny 300 na 600 mg / andro an'ny PEA dia naneho fihenan'ny fanaintainan'ny sciatica mahery tamin'ny fisedrana lehibe olona maherin'ny 600. Ny PEA dia nampihena ny fanaintainana maherin'ny 50% tao anatin'ny 3 herinandro monja, izay zara raha tratran'ny fanafody fanaintainana.
· Ny fahasalamana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny ati-doha
PEA koa dia fantatra fa mahasoa amin'ny aretina neurodegenerative sy ny lalan-dra. Ny famenon-tsakafo dia tsikaritra fa manatsara ny fiasan'ny ati-doha amin'ny fanampiana ireo selan'ny ati-doha hiaina sy hampihena ny fivontosana.
Tamin'ny fandinihana ireo marary 250 tapaka lalan-dra, ny famolavolana PEA misy luteolin dia naneho famantarana ny fanatsarana ny fahasitranana. Izy io koa dia ambara fa misy vokany mahasoa amin'ny fahasalaman'ny ati-doha tsara, ny fahaizany misaina ary ny fiasan'ny ati-doha isan'andro. Ny vokany dia tsikaritra aorian'ny famenon-tsakafo 30 andro ary rehefa afaka roa volana ny fanampiana dia tsikaritra ny fanatsarana bebe kokoa.
Samy miaraka amin'ny luteolin sy irery, ny PEA dia hita hisorohana ny aretin'i Parkinson amin'ny totozy rehefa ampiasaina amin'ny luteolin. Mampihena ny fahasimban'ny ati-doha amin'ny fiarovana ny neurônôma dopamine. Na izany aza, ilaina ny fandinihana klinika mahazatra hanamarinana ireo fikarohana ireo.
Ny fanadihadiana iray hafa dia naneho fa ny PEA miaraka amin'ny luteolin dia nanampy tamin'ny fanatsarana ny anton-neurotrophic toy ny BDNF & NGF izay proteinina mahery kely ilaina hamoronana sela ati-doha vaovao. Nanatsara ny fahafahan'ny atidoha mamerina mamorona sela sy sela vaovao taorian'ny fahasimbana nahazo ny tadin'ny hazon-damosina na ny ati-doha. Rehefa nampiasaina tamin'ny totozy ny PEA niaraka tamin'ny luteolin dia nanatsara ny fanasitranana ny hozatra tamin'ny totozy niaraka tamin'ny ratra nahazo ny hazondamosina.
Noho ny fisehoan-javatra voajanahary amin'ny cannabinoids ao amin'ny PEA, ny vokany dia naneho fanatsarana ny fitondran-tena, ny toetran'ny marary. Nampiseho risika fihenan'ny totozy io. Na izany aza, ny vokadratsy amin'ny fanintona dia mbola tsy hadihadiana amin'ny olombelona ary ilaina ny fanadihadiana bebe kokoa hanamarinana izany.
· Ny vokany eo amin'ny fo
Ny aretim-po dia vokatry ny fanakanana ny lalan-dra mankamin'ny fo. PEA dia fantatra fa mamerina amin'ny laoniny ny fahasimban'ny sela ao am-po ary mampitombo ny fikorianan'ny rà mankamin'ny fo izay manampy amin'ny fihenan'ny tranga aretim-po. Ny fandinihana ny totozy koa dia naneho ny fihenan'ny haavon'ny cytokine mamaivay ao am-po.
Ny fampiasana PEA koa dia nampihena ny haavon'ny tosidra ambony amin'ny voalavo ary nanakana ny fahasimban'ny voa amin'ny alàlan'ny fampihenana ireo zavatra mamaivay. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny lalan-drà, dia nahomby ny PEA hanakanana ny anzima sy ny mpandray izay mampitombo ny tosidra.
· Famantarana ny fahaketrahana
Tamin'ny fanadihadiana vao haingana, olona 58 mijaly amin'ny fahaketrahana no voatsabo amin'ny PEA. Dosis 1.2 gm isan'andro dia nomena ny marary mandritra ny 6 herinandro mahery. Izany dia nahatonga ny fanatsarana haingana ny toe-po sy ny soritr'aretina ankapobeny. PEA raha ampiana amin'ny fanafody antidepressant ie, citalopram, dia nampidina ny soritr'aretin'ny fahaketrahana amin'ny 50% mahazatra.
· Fambara an'ny sery mahazatra
Ny fandinihana iray hafa dia nampiseho ny PEA ho fanafody mahomby hiadiana amin'ny virus gripa izay mahatonga ny sery. Tamin'ny fanadihadiana tany am-boalohany nataon'ny olona 4 mahery, ny PEA dia afaka naneho fiatraikany tsara tamin'ny tsimatimanota ary nanampy tamin'ny fampihenana ireo soritr'aretina toy ny gripa amin'ny marary.
Tamin'ny fandinihana iray hafa, miaramila tanora 900 no nomena PE1,200 teo amin'ny XNUMX mg izay nampihena ny faharetan'ny hatsiaka sy ireo soritr'aretina sitrana toy ny tenda, orona, tazo ary aretin'andoha.
· Faty aretin-tratra
Ny PEA farany fa tsy ny kely indrindra dia nampiasaina tamin'ny fomba mahomby mba hamelomana indray ireo mariky ny aretin'ny tsinay (IBS) amin'ny biby. Ny famenon-tsakafo PEA rehefa notsapaina tamin'ny totozy niaraka tamin'ny fivontosan'ny tsinay mitaiza, dia nanampy tamin'ny fanarahana normal ny fihetsiky ny tsinay sy ny fisorohana ny fahasimban'ny lamosin'ny vavony.
Ny fahasimban'ny vavony na ny fivontosana dia ateraky ny colitis ulcerative izay mety hitarika amin'ny risika homamiadana. Ny fampiasana PEA dia nanakana ny tavy tsinay ara-dalàna tsy hampiroborobo ny totozy be loatra amin'ny totozy. Ny PEA dia mampihena ny cytokines mampihetsi-po sy ny fitomboan'ny neutrofil ary ny sela fiarovan'ny vatana izay manamafy ny soritr'aretin'ny fahasimban'ny vavony.
Na dia asidra matavy tototry ny PEA aza, ny fanatontosana tavy maivana kokoa amin'ny sakafonao dia hanimba bebe kokoa noho ny tsara. Ny fihinanana sakafo be tavy matavy dia tsy hampitombo ny famokarana PEA ao amin'ny vatanao fa hampitombo ny risika mety hanananao aretina mitaiza sy mamaivay isan-karazany.
Ny sakafo toy ny vokatra soja, lecithin soja, voanjo ary alfalfa dia loharano lehibe azo avy amin'ny PEA. Ny olona voan'ny aretin'ny voanjo dia tsy maintsy mandingana voanjo ary mihinana sakafo hafa. Ny atody atody dia loharano tsara hafa ary azo lanin'ny olona tsy mahalala ny atody. Ireo mpanjifa koa dia afaka mieritreritra ny handray fanampim-panafody PEA satria safidy azo antoka sy mahomby izy ireo.
Manampy fatra sy fiarovana ny PEA
Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny klinika, farafahakeliny 600 mg / andro dia mety takiana mba hanamaivanana ny fanaintainan'ny nerve, ary ny fatra 1.2 g / andro dia mety ampiasaina hitsaboana ny fanaintainan'ny diabeta diabeta.
Ho an'ireo marary diabeta mijaly amin'ny olana amin'ny maso, ny doka hatramin'ny 1.8 g / andro dia mahomby amin'ny fampihenana ny fahasimban'ny hozatry ny maso.
Ho an'ny fanasitranana ny sery mahazatra, 1.2 g / andro PEA no fatra mahazatra.
Miresaha amin'ny dokotera alohan'ny handraisanao fanampin-tsakafo PEA satria ny PEA dia tsy nankatoavin'ny FDA handray doka lehibe kokoa.
Ny fihinanana vovoka Palmitoylethanolamide na famenony kely, fatra voafetra amin'ny ankapobeny dia heverina ho azo antoka. Na izany aza, ilaina ny fandalinana klinika bebe kokoa amin'ny doka avo kokoa. Ny fanampiana PEA maharitra dia fantatra ihany koa fa azo antoka hoy ny fanadihadiana kely natao.
Ny mpanamboatra sasany avy amin'ny ozinina mpanamboatra PEA dia manolo-kevitra ny hizara roa ny fatra totaliny ary handany azy mandritra ny andro. Amin'ny tranga sasany, ny PEA micronized, izay amin'ny teny tsotra dia vovoka palmitoylethanolamide tsara, dia fantatra fa mifoka ao anaty vatana ary ny mpahay siansa dia mihevitra ny endrika vovoka ho ambony noho ny endrika hafa.
Vokatry ny PEA
Ny fanjifana am-bava ny palmitoylethanolamide amin'ny ankapobeny dia heverina ho azo antoka ho an'ny ankamaroan'ny olon-dehibe rehefa ampiasaina hatramin'ny 3 volana. Hatreto dia mbola tsy nisy ny fahasarotana lehibe na ny fifampitondrana amin'ny zava-mahadomelina. Na izany aza, tsy ampy ny fampahalalana milaza fa azo antoka ny fanafody raha ampiasaina mandritra ny telo volana. Ny voka-dratsy dia mety ahitana vavony mikorontana, izay tena tsy fahita firy.
Mba ho mazava kokoa, ny PEA dia tsy niteraka fahasarotana matotra tamin'ireto fandalinana etsy ambony ireto saingy mbola tsy ampy ny fandalinana azo antoka. Ary koa, tsy misy porofo tsy ampy hahitana ny habetsaky ny fahombiazan'ny PEA amin'ny marary manana karazana fanaintainana ireo.
Bevohoka sy ny zaza
PEA amin'ny ankapobeny dia heverina ho azo antoka amin'ny fampiasana olon-dehibe ary ny fanadihadiana roa dia naneho tsy dia atahorana ho an'ny ankizy. Saingy ny fanadihadiana lehibe kokoa dia mila manamarina ny fiarovana ny PEA amin'ny ankizy. Noho ny tsy fahampian'ny antontan'isa ara-pahasalamana ampy, ny vehivavy bevohoka sy ny mampinono dia asaina manaraka fampitandremana ary manatona dokotera alohan'ny handraisana fanampin-tsakafo PEA.
Ny PEA dia nampihena ny vokatra ratsy sy ny fanaintainana marobe rehefa nanatsara ny kalitaon'ny fiainana. Ny fandinihana azy dia manohana ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny asidra matavy ary ampirisihina ho azo antoka amin'ny fampiasana klinika an'ny PEA. Ny famenon-tsakafo dia mandaitra indrindra amin'ny syndrom-pananahana, ao anatin'izany ny sindrom-panafody carpal sy ny fanaintainan'ny sciatic. Mora raisina koa ny famenony PEA ary azo am-bava.
Aza adino ny manatona dokotera alohan'ny handraisana fanampin-tsakafo PEA satria ny doka PEA avo kokoa dia mety hitarika fahasarotana sasany. Na dia somary malefaka aza ny fahasarotana ary tsy dia matotra, ny PEA dia tsy tokony ampiasaina ho solon'ny fitsaboana ara-pahasalamana nekena. Na izany aza, ny tombontsoa voalaza sy voalaza etsy ambony dia natao tamin'ny biby sy sela. Ny porofo ara-pitsaboana marin-toerana dia mbola tsy ampy.
Fikarohana bebe kokoa amin'ny olombelona no takiana mba hamaritana ny vokatry ny PEA amin'ny fahasalaman'ny vavony, ny fo ary ny famotsorana histamine.
Palmitoylethanolamide (PEA) vovoka amidy & Aiza no hividianana vovoka Palmitoylethanolamide (PEA) betsaka
Mpamatsy vovobony Palmitoylethanolamide (PEA) matihanina mandritra ny taona maro izahay, manome ny vidiny miaraka amin'ny vidiny mifaninana, ary ny vokatra aminay dia manana kalitao avo indrindra ary miatrika fitsapana hentitra, mahaleo tena mba hahazoana antoka fa azo antoka ny fanjifana eran'izao tontolo izao.
Hansen HS. Palmitoylethanolamide sy kongresy anandamide hafa. Ny anjara asa ao amin'ny atidoha marary. Exp Neurol. 2010, 224 (1): 48-55
Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V. N-palmitoyl-ethanolamine: biochemistry sy fomba fitsaboana vaovao. Biochimie. 2010, 92 (6): 724-7
Cerrato S, Brazis P, della Valle MF, Miolo A, Puigdemont A. Vokatry ny palmitoylethanolamide amin'ny histamine tsy voatanisa, PGD2 ary TNFα amin'ny fametahana sela hoditra hoditra. Vet Immunopathol. 2010, 133 (1): 9-15